Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo oo saaka ku wajahan Dhuusa Mareeb – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta Gobolka Galgaduud, halkaasoo ay maamulaan Culumaa’udiinka Ahluna Wal-jameeca.
Qaban qaabo lagu soo dhoweynayo wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka socota Dhuusa Mareeb, iyadoo ciidamada Ahlusuna ay si aad ah u adkeeyeen ammaanka magaalada.
Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ayaa kala hadli doona Maamulka Ahlusuna arrimaha nabadgelyada, siyaasada, iyadoo Ahlusuna ay waxyaabo badan ka tabaneyso dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaaraha uu kala hadli doono Ahlusuna sidii loo bilaabi lahaa wada hadal dhex mara Maamulka Ahlusuna iyo Maamulka Galmudug oo horay isku dayo badan oo socday lagu guuldareystay in labada dhinac lagu wada hadalsiiyo.
Maamulka Ahlusuna ayaa aqoonsaneyn Maamulka Galmudug oo sanadkii la soo dhaafay lagu dhisay degmada Cadaado, iyadoo horay dagaalo u dhaxeeyay Ahlusuna iyo Galmudug u dhex maray.
Booqashada Ra’iisul Wasaaraha maanta oo sabti ah ku tagayo degmada Dhuusa Mareeb ayaa ku soo aadeysa, iyadoo horay wafdi uu hogaaminayay Guddoomiyaha Baarlamaanka ay booqdeen Dhuusa Mareeb, inkastoo booqashadaas uu cambaareeyay Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Ahlusuna ayaa gacanta ku heysa degmada Dhuusa Mareeb oo ah Caasimada Maamulka Galmudug, degmada Guriceel iyo deegaano kale.
Waxaa si rasmi ah maanta u bilaawmay imtixaanka shahaadiga dugsiga ey qaadayaso wasaarada waxbarashada